सरकारले किन सुन्दैन हाम्रो अनुभव ? |
सरकारले किन सुन्दैन हाम्रो अनुभव ?
प्रकाशित मिति :2019-06-05 12:53:12
मैले यस्ता वस्तु नेपाली बालबालिकाका लागि उपयुक्त नभएको बारे विभिन्न समयमा स्वास्थ्य मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव लगायतलाई भन्दै आएकी छु । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईं ठूला व्यापारीसँग एक्लै लड्नुहुन्छ ?” पछि थाहा पाएँ, ती व्यापारीलाई रोक्ने साहस सरकारसँग पनि रहेनछ ।